China High-ekupheleni Camshaft ifektri kanye nabaphakeli | USAMUWELI
I-Camshafts iyingxenye ebucayi yenjini futhi ixhunywe ku-crankshaft ngamaketanga noma amabhande (ibhande lesikhathi, amaketanga wesikhathi), i-camshafts iqhutshwa yi-camshafts futhi ilawula nama-valve. Lobu budlelwano bulawula umoya kuzingxube zephethiloli (izinhlelo zendabuko zomjovo) kanye nendawo yokukhipha ngokusebenzisa ukusebenza kwamavelu.
Umkhiqizo wenziwe ngensimbi ephezulu ye-ductile futhi iphathwa ngobuchwepheshe bokuqinisa indawo ukwenza ngcono ukukhathala kwe-camshaft. Ifanele izimoto, imikhumbi, izimoto zobunjiniyela, imishini yezolimo, isethi ye-generator, ikhwalithi yangempela, enokubukeka okuhle, ukuminyana okuphezulu, ubushelelezi, ukukhanya nokuqina ngemuva kokuqeda. Umkhiqizo ngamunye uhlolwe ngokuqinile futhi ikhwalithi yawo iqinisekisiwe. Ukupakisha ibhokisi kunokubukeka okuhle nomjikelezo wokukhiqiza oqinile: izinsuku zokusebenza ezingama-20-30, ukupakisha okungathathi hlangothi / ukupakisha kwasekuqaleni, indlela yokuhamba: umhlaba, ulwandle nomoya.
ICamshaft isebenza lawa mavalvu ngama-lobes atholakala kushaft ye-camshaft uqobo, njengoba ejikeleza ngokucindezela ama-valve phansi. Amaphayiphu alayishwa entwasahlobo (kungacindezelwa umoya osetshenzisiwe) bese ubuyela endaweni yokuqala, ulinde isikhathi esizayo lapho ama-lobes ejikeleza emuva nxazonke, aqhubeke nomjikelezo. Kukhona womabili amandla okungena nawokukhipha i-outlet valve futhi kwenye idizayini yenjini efana ne-DOHC (i-double overhead cam) ingaba namasethi ama-valve amabili kokungena ngakunye.
Ungacabanga ukuthi i-crankshaft ixhunywe kuma-camshafts nge-cambelt, kanti ama-camshafts axhunywe kuma-valve, wonke asebenza ngokubambisana. Ngesikhathi sokusebenza okujwayelekile iphrofayli ejwayelekile ye-camshaft ingahle ifanelwe izici ezithile zenjini, kepha kukhona ukusethwa kwamanani okuguquguqukayo okungaguqula iphrofayili ye-cam yokusetshenziswa kokusebenza- iHonda yaziwa kakhulu ngobuchwepheshe obunjalo.
Ukwehluleka okuvamile kwama-camshafts kufaka phakathi ukugqoka okungajwayelekile, umsindo ongajwayelekile, nokwephuka. Ukwehla nokudabuka okungavamile kuvame ukwenzeka ngaphambi kokuba umsindo ongajwayelekile nokuqhekeka kwenzeke.
(1) I-camshaft itholakala cishe ekugcineni kohlelo lokuthambisa injini, ngakho-ke isimo sokuthambisa asinathemba. Uma ipompo likawoyela lingenayo ingcindezi yokulethwa okwanele ngenxa yesikhathi sokusebenzisa ngokweqile noma ezinye izizathu, noma indawo yokuthambisa kawoyela ivinjiwe, uwoyela othambisa umzimba awunakufinyelela ku-camshaft, noma i-torque yokuqinisa yebhawodi yokuqinisa ibhawodi ikhulu kakhulu, uwoyela othambisa umzimba ayikwazi ukufaka igebe le-camshaft. Kubangela ukugqoka okungavamile kwe-camshaft.
(2) Ukugqokwa okungajwayelekile kwe-camshaft kuzodala ukuthi igebe phakathi kwe-camshaft nendawo yokuhlala kube nokwanda, futhi ukufuduka kwe-axial kuzokwenzeka lapho i-camshaft ihamba, okuholele emsindweni ongajwayelekile. Ukugqoka okungajwayelekile nakho kuzoholela ekwandeni kwegebe phakathi kwe-drive cam ne-hydraulic tappet. Lapho i-cam ne-tappet ye-hydraulic ihlanganiswa, umthelela uzoba khona, okuholele ngomsindo ongajwayelekile.
(3) I-Camshafts kwesinye isikhathi iba nokuhluleka okukhulu njengokuqhekeka. Izimbangela ezijwayelekile zifaka phakathi ama-tappets we-hydraulic aqhekeza noma agqoke kanzima, ukuthambisa okungathí sina, ama-camshafts asezingeni eliphansi, nokuqhekeka kwegiya lesikhathi se-camshaft.
(4) Kwezinye izimo, ukwehluleka kwe-camshaft kubangelwa izizathu zomuntu, ikakhulukazi lapho injini ingahlukaniswanga kahle lapho injini ilungiswa. Isibonelo, lapho uqaqa ikhava ethwala i-camshaft, sebenzisa isando ukushaya ngamandla noma usebenzise i-screwdriver ukuthola ingcindezi, noma ukufaka ikhava ethwele endaweni engafanele, ngakho-ke ikhava ethwalayo ayihambelani nesihlalo sokuthwala, noma i-torque eqinisayo okokufaka okokufaka ikhava yokumboza kukhulu kakhulu. Lapho ufaka ikhava ethwalayo, naka imicibisholo yokuqondisa nezinombolo zesimo ebusweni bekhava ethwele, bese usebenzisa isikrufu se-torque ukuqinisa amabhawodi wokuqinisa aqinisa amabhawodi ngokuhambisana ne-torque ebekiwe.
Eliphezulu imoto camshaft:
Izinhlobo zemoto ezisebenzayo IVolkswagen
Impact amandla 1000 （mPa）
Ubukhulu bephakheji 500 * 20 * 20
Inombolo ye-athikili YD358A
Okwenziwe kwenziwa ngensimbi ephezulu ye-ductile futhi iphathwa ngobuchwepheshe bokuqinisa indawo ukwenza ngcono ukukhathala kwe-camshaft. Ifanele izimoto, imikhumbi, izimoto zobunjiniyela, imishini yezolimo, ikhwalithi yangempela, enokubukeka okuhle, ukuminyana okuphezulu, ubushelelezi, ukukhanya nokuqina ngemuva kokuqeda. Umkhiqizo ngamunye uhlolwe ngokuqinile futhi ikhwalithi yawo iqinisekisiwe. Ukupakisha ibhokisi kunokubukeka okuhle nomjikelezo wokukhiqiza oqinile: izinsuku zokusebenza ezingama-20-30, ukupakisha okungathathi hlangothi / ukupakisha kwasekuqaleni, indlela yokuhamba: umhlaba, ulwandle nomoya.
Ifanele izimoto, imikhumbi, izimoto zobunjiniyela, imishini yezolimo, ikhwalithi yangempela.
Langaphambilini Ikhwalithi ephezulu eyisilinda
Olandelayo: Uhla oluphelele lwe-crankshafts yezimoto iCrankshaft
Izingxenye ze-Auto Spare